फ्रान्सको राजनीति, अब के हुन्छ? - सांप्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
फ्रान्सको राजनीति, अब के हुन्छ?
नोभेम्बर 5, 2020 नोभेम्बर 5, 2020 क्रिस्टिना किटोवा युरोप, फ्रान्स, फ्रान्स फ्रिल्यान्सिंग ग्लोबल गिग, फ्रान्स थोक - B2B, ग्लोबल विश्व, समाचार लेख, टर्की, टर्की फ्रीलान्स ग्लोबल गिग्स, टर्की थोक र B2B
फ्रान्सले भर्खरको हिंसाको कार्यहरुको कारण सुरक्षा बढायो।
फ्रान्स मा दोस्रो ठूलो धर्म इस्लाम हो।
फ्रान्स चौबाटोमा छ।
गत हप्ता, फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले "इस्लामिक आदेश" को बिरूद्ध एक आक्रामक प्रक्षेपण र "लीक" गरे। यो आपत्तिजनक एक उपयोगितावादी र स्थानीय चरित्र छ, र शायद नयाँ एक "क्रुसेड" मा खींचिएको हो कि फ्रांसीसी सार्वजनिक कल्पना छैन। यद्यपि सामान्य अवस्थामा पनि यस्ता नतिजाले शुद्ध राजनीतिलाई मार्ग दिन्छ।
इमानुएल जीन-मिशेल फ्रेडरिक म्याक्रोन फ्रान्सेली गणतन्त्रका २०१ 2017 देखि राष्ट्रपतिको रूपमा सेवा गरिरहेका एक फ्रान्सेली राजनीतिज्ञ हुन्। म्याक्रोनलाई २०१२ को मे २०१ in को निर्वाचनको लगत्तै राष्ट्रपति फ्रान्कोइस ओलाडेले उप-महासचिव नियुक्त गरे र म्याक्रोनलाई हलान्डेको वरिष्ठ सल्लाहकार बनाए।
उत्तेजक कार्टुनहरू विवादास्पद पत्रिका "चार्ली हेब्डो" मा प्रकाशित र उनीहरूमा कट्टरपन्थी इस्लामीहरूको प्रतिक्रिया सबैलाई थाहा छ। यद्यपि फ्रान्सेली राज्यको नितीको नतिजा पनि ज्ञात छ, बहुसांस्कृतिकवादको अगाडि मानव सम्बन्धको यथार्थलाई बिर्सिएको छ।
फ्रान्समा दोस्रो ठूलो धर्म इस्लाम हुन असम्भव छ र केही हदसम्म उनीहरूको विचार परिवर्तन गर्न। फ्रान्सले अन्धाधुन्ध भएर सबैलाई भित्र पस्न रोज्यो, नयाँ "प्रवासी" लाई राम्रो जाँच नगरी। यद्यपि फ्रान्सले युरोपियन युनियन दिशानिर्देशहरूको पालना गरिरहेको थियो।
यदि फ्रान्स नेता हुन चाहन्छ भने, त्यस्ता प्रविष्टिहरूको विरोध गर्नुपर्‍यो। यसको सट्टा, फ्रान्सले फ्रान्सेली जनताको शिर काटिएको र आतंकवादी हमलाको साथ दृश्यको अनुमति दिए।
यसबाहेक, फ्रान्सले चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ कि त्यसले यसको बिरूद्ध लड्न चाहँदैन र विधिहरू प्रयोग गर्दछ जसले स्थानीय समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्दछ। साथै, यसले आधुनिक फ्रान्सको मुख्य समस्याहरूको अभिव्यक्ति गर्दछ, जुन फ्रान्सेली राजनीतिक पहिचानको कडा जगको हानी हो।
यो विचार २० औं शताब्दीको १ 1950 s० को दशक देखि फैलियो। आप्रवासीहरूले फ्रान्सेली भाषा राम्ररी बोल्छन् तर उनीहरू आफैंलाई फ्रान्सेली राजनैतिक समाजको भागका रूपमा हेर्दैनन्, र उनीहरू शताब्दीयौंदेखि स्थापित फ्रान्सेली सामाजिक व्यवस्थाको हिस्सा हुन चाहँदैनन्।
तिनीहरूका लागि फ्रान्स भोल्टेयर र डायडेरोटको फ्रान्स होइन। बउमरचेस र मोलियर उनीहरूको फ्रान्स होईन, र सायद फ्रान्स होइन, तर केहि ऐतिहासिक अभिजातिकतासँग अहिलेको प्रासंगिकता र महत्व छैन। पछिल्लो चलन दिईयो, इतिहास मेटिदै छ।
विरोधी विचारहरू व्यवहार गर्ने विधिको रूपमा शिर निहुराउने प्रयोग गर्ने उही आप्रवासीहरू फ्रान्समा यही गरिरहेका छन्। समग्रमा, यो तिनीहरूको गल्ती होईन। पश्चिम मध्य पूर्व सहित विश्व परिवर्तन गर्न चाहान्छ। सद्दाम हुसेन र अरूलाई हटाएर, यो सबै गरेको कुरा प्रवासी र नागरिक युद्धको बाढी उत्पन्न भयो।
यसबाहेक, फ्रान्सेली समाजको समस्या स्थानीयमा विभाजित छ / आप्रवासीहरू फ्रान्सेली संस्कृति / इस्लामको परम्परा बीचको टकरावको सन्दर्भमा यो अझ व्यापक भएको छ कि यसले अवस्थाबाट बाहिर जाने बाटो मात्र देख्दैन।
परिणामस्वरूप, म्याक्रोनको बयानहरू जुन धेरै हदसम्म प्रतिक्रियावादी थियो, ईतिहासका शिक्षक र टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयिप एर्दोगनको बिरूद्ध निर्देशित भौगोलिक अर्थको विरुद्ध गरिएको प्रवासी किशोरीको अपराधको प्रतिक्रियाहरूका रूपमा ती अभिव्यक्तिहरू मात्र आत्मसात र अस्पष्ट थिएनन्। स्पष्ट कुरा, यो फ्रान्सको लागि पनि हानिकारक थियो, परिणाम विनाशकारी थियो र एक लामो समय को लागी परिस्थिति असर गर्नेछ।
वास्तवमा यो कुनै आश्चर्यजनक कुरा होइन कि फ्रान्सको इस्लामिक चरमपन्थसँग सम्बन्धित समस्या छ। विगतका उपनिवेशहरूबाट जनसंख्याको सक्रिय प्रवासको सम्पूर्ण नीतिलाई ध्यानमा राख्दै, जुन एक दशक भन्दा बढी समयदेखि चल्दै आएको छ।
यो प्रक्रिया उत्तर अफ्रिकाको विकृतिकरणको समयमा सुरु भयो र अहिले सम्म समाप्त भएको छैन। यो याद गर्नुपर्दछ कि फ्रान्सले अझै पनि अफ्रिकी देशहरूबाट उपनिवेश शुल्क लिन्छ, यसैले मूलतः उनीहरूको आफ्नै सम्पत्ति लुट्छ। यद्यपि फ्रान्सले उही आप्रवासीहरू देशलाई नोक्सान पुर्‍याउन फ्रान्स आउने गुनासो गरे।
रेसेप तायिप एर्दोआन २०१aदेखि टर्कीका १२ औं र वर्तमान राष्ट्रपतिको रूपमा सेवा गरिरहेका टर्की राजनीतिज्ञ हुन्। उनले यस अघि २०० 12 देखि २०१ 2014 सम्म प्रधानमन्त्रीको रूपमा र १ 2003 2014 to देखि १ 1994 1998 from सम्म इस्तानबुलको मेयरको रूपमा काम गरे।
फ्रान्स मा इस्लाम लामो एक डर र एक वास्तविकता भएको छ। एकातिर मुलुकमा मस्जिदहरूको संख्या बढ्दो छ, र अर्कोतर्फ, इस्लामोफोबियाको बिरूद्ध लगातार आवधिक विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ।
एकातिर, लेखक फ्रान्सको इस्लामिक भविष्यको साथ पाठकलाई डराउन खोजिरहेका छन्, र अर्कोतर्फ, तिनीहरूले बहु-शरीर सौष्ठवको प्रशंसा गरिरहेका छन्, जसले इस्लामिक विकासलाई प्रोत्साहित गर्दछ।
एकातिर, सबैजनाले आप्रवासीहरुबाट हुने खतराको बारेमा कुरा गरिरहेका छन्, र अर्कोतर्फ, फ्रान्सले कानूनी र गैरकानुनी आप्रवासीहरुको नयाँ भीडमा आफ्नो फाटक खोलिरहेको छ।
समग्रमा, कानून प्रवर्तन प्रणाली एकल आतंककारीले चक्कुको हातहतियारले खतराहरूसँग सामना गर्न सक्दैन। तपाईं चक्कुको बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्नुहुन्न! प्रत्येक बासिन्दाहरूलाई नियन्त्रण गर्न सम्भव छैन। भविष्यमा यस्ता आक्रमणहरू दोहोरिनेछ।
वर्तमानमा राजनीतिक शुद्धता र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको सवालमा मौलिक द्वन्द्व रहेको छ। फ्रान्सको कन्ड्रम छ। यसले सबै धर्महरूलाई प्रतिबन्ध लगाउन सक्दैन। के यो समय हुन सक्छ कि प्रत्येक एकल चरमपन्थी समानुभूतिदाता र उनीहरूका परिवारहरूको स्थितिको खण्डन गरेर उनीहरूलाई फिर्ता पठाउन?
भर्खरका आक्रमणहरू वास्तवमै एर्दोगनको दृष्टिकोण विन्दु र इस्लामी श्रेष्ठताको कारणले भएको हो। फ्रान्सको अर्थव्यवस्था कोरोनाभाइरस प्रभावहरु द्वारा कमजोर छ। म्याक्रोनको आफ्नै हातमा बहु-प्रमुख समस्या छ, ईयु देशका बहुमतहरू जस्तै।
अन्तीममा, यो स्पष्ट छ कि जाँच गर्न आवश्यक छ र अब फ्रान्सले आप्रवासीको लापरवाह प्रवेशको गडबड सफा गर्न आवश्यक छ। आवश्यक पर्ने एउटा कदम भनेको गुप्तचरका कर्मचारीहरुलाई बृद्धि गर्नु र प्रत्येक आतly्ककारी सहानुभूतिलाई पक्राऊ गर्न र निर्वासनमा लगनशील भएर काम गर्नु, फ्रान्सेली नागरिकता हटाएर वा जेलमा स्वचालित रूपमा जीवन दिनु हो।
सांप्रदायिक समाचार इमानुएल म्याक्रोन फ्रान्स इस्लाम रेपप टिपी उर्दू टर्की
अनलाइन व्यापार सेट अप गर्दा यी गल्तीहरूबाट टाढा रहनुहोस्
ट्रम्प पोष्टहरूमा ट्विटर र फेसबुक थप्पड चेतावनी लेबल